Xannaanada - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
Meel carruurtu jecel yihiin inay wax ku bartaan
Xannaanadu waa sanad muhiim ah. Waxay carruurtu ku bartaan xanaanada waxay ka caawisaa sidii loo dhisi lahaa aasaaska barashada nolosha oo dhan. Waxaan barnaa carruurta sida loo akhriyo loona qoro, sida loola dhaqmo dadka kale, iyo sida loo xalliyo dhibaatooyinka. Laakiin ka sii muhiimsan, waxaan barnaa carruurta sida ay u jecel yihiin barashada!
Cunnugaagu wuxuu yeelan doonaa saaxiibo cusub wuxuuna heli doonaa waqti badan oo uu ku ciyaaro kuna sahmiyo adduunka ku xeeran. Waxaan ku soo dhaweyneynaa canug walba heerkiisa awoodeed ee hadda waxaanna siineynaa waxqabadyo waxbarasho oo ku habboon koritaanka.
"Wiilkeennu aad buu u koray labadii bilood ee ugu horreeyay - tani waxay ahayd mid aad u muuqatay markii uu ii akhriyay buug markii ugu horreysay. Weligay ma ilaabi doono xilligaas."
Isqor KindergarteN Maanta
Waxaan dejinay rajooyin sare oo ah hanashada tacliinta iyo koritaanka shaqsiyeed ee dhammaan ardaydeena.
Waxaan u oggolaan carruurta waqti si ay u sahamiyaan, sameeyo sahaminta, iyo waayo-aragnimo hodan ku ah, waxqabadyada gacanta.
Waxaan abuureynaa daacad, ixtiraam, daryeel iyo badbaado meelo aqoonsan, aqbala oo dhiirrigeliya kala-duwanaanta.
Waxaan dhiiri galinaynaa iskaashiga, wada shaqeynta iyo iskaashiga la shaqeynta ardayda, qoysaskooda iyo shaqaalaha iskuulka.
Maxaan Ka Filayaa Xanaanada
Ma isweydiineysaa waxa ilmahaagu ku baran doono xanaanada? Ma xiiseyneysaa waxa ay baran doonaan dhawr sano gudahood? Ama waxaa laga yaabaa inaadan xasuusan karin goorta ay u maleynayaan in iskuulkaas la dhameystiray! Khariidadeena Qoyska waxaa loogu talagalay inay kaa caawiso inaad hesho jawaabaha dhammaan su'aalahaaga la xiriira dugsiga.
"Waan ka mahadcelinayaa xiisaha macallimiintu u qabaan ardayda. Waxay xanaanada ka dhigayaan meel u fiican carruurteenna."